Guddida Horu Marinta Mataanaha Arab Iyo Garxajis Oo Warsaxaafadeed Soo Saaray Iyo Waxyaabaha Ay Kaga Hadleen
(Hadhwanaagnews) Friday, December 07, 2018 15:35:04
Hargeysa(HWN):-Guddida horu marinta mataanaha ee Arab iyo Garxajis ayaa soo saaray warsaxaafadeed ay kaga hadleen xaaladaha isbadal ee ka jira geeska Afrika.
Warsaxaafadeedka guddida horu marinta mataanaha Arab iyo Garxajis ayaa u dhignaa sidan:-
Dhambaalkan waxaanu ku taageeraynaa isbadalada dhinaca wanaaga loo qaaday dalka Itoobiya (Ethiopia) kuna sidkan furfurnaan iyo in dalkaasi la rabo in la dhamaystiro nidaamkiisa duqmaraadiyadeed. Waxaanu dhamaan bulshada ku dhaqan dalkan ku hambalyaynaynaa in la qaaday dariiqii horumarka iyo sinaanta sidaasdarteed waxaanu kula talinaynaa in ay taageeraan dedaalada qiimaha iyo miisanka leh ee Rasalwasaare Abiy Axmed ku talaabsaday. Gaar ahaan waxaanu uga codsanaynaa qoomiyada Soomaalida Itoobiya inay si gaar ah ula shaqeeyaan isbadalkaas lagu diirsaday lana shaqeeyaan xukumadaha dawlada dhexe iyo dawlad
deegaanka Soomaalida ee ay kala hogaaminayaan Md. Abiy Axmed, rasalwasaaraha iyo Md. Mustafe Muxumed Cumar (Cagjar), madaxwaynaha dawlad deegaanka Soomaalida.
Marlabad waxaanu si gaar ah Madaxwaynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ugu hambalyaynaa inuu dardargaliyay soo afjaray colaadii ka dhaxaysay Jabhada OLF iyo Dawlada Itoobiya iyada oo laysku afgartay in wixii cabasho iyo rabitaan ah lagu dhameeyo wado iyo sifo salmi ah.
Madaxda urrurka OLF oo uu ugu horeeye Admiral Maxamed Cumar Cismaan, Guddomiyaha urrurka, Dr. Maxamed Ismaaciil, G/ku xigeenka iyo Md. Cabdi Aar, Hoogaankii Gaashaandhiga urrurka iyo dhamaan xubnaha jabhadan waxaanu ku hambalyaynaynaa sidoo kale inay qaateen go’aan geesinimo oo dalkooda iyo dadkooda gaar ahaan bulshada iyo deegaanada Soomaalida Itoobiya u dan ah. Taasi oo ay aqbaleen in la soo afjaro colaadii iyo dirirtii hubaysnaydee la rabay in lagu gaadho tabashooyinka iyo rabitaanka dadka ay matalayeen, iyada lagu badalay in lagu raadiyo heshiis iyo is-afgarad ku dhisan aqoon, dood, wax iswaydiin iyo isqancin. Urrurka waxaanu dhinacooda ku adkaynaynaa inay xaqdhawraan, ilaaliyaana heshiiska lagu gaadhay Asmara.
Md. Mustafe (Cagjar), madaxwaynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaanu ugu bushaaraynaynaa in bulshada beelaha Mataanaha Arab & Garxajis meelkasta oo ay joogaan; gaar ahaan kuwa ku dhaqan deegaanada maalmulkaaga hoos yimaada ay diyaar u yihiin inay adiga iyo dawlada dhexeba la shaqeeyaan si muwaadinimo iyo lexejeclo badani ku jirto.
Bulshada Soomaalida ah, khusuustan bulshada Mataanaha Arab & Garxajis ku abtirsata ee dagan dalka Itoobiya (Ethiopia) waxaanu ka codsanaynaa inay taageeraan dedaalada lagu badalaayo nidaamkii xidhxidhnaa ee dalka ka jiray iyada la rabo in dalkeena laga dhigo mid leh nidaam furfuran siyaasiyan, ganacsiyan iyo dhaqaale ahaanba arintaasi oo danwayni ugu jiro guud ahaan umada Afrika iyo Geeska Afrikaba gaar ahaan; deegaanadeena iyo dadkeena ka mid ah dawlad deegaanka Soomaalida.
Waxaynu rajaynaynaa isbadaladan cusubi in ay dalka u horseedaan horumar, inshaALLAH na lagu badhaadho, hadaba dhinaceena waxa looga baahan yahay inaynu sii labanlaabno dedaaladii aynu ugu jirnay taageerida isbadaladan. Waa inaynu si xilkasnimo leh kuna dheehantahay lexejeclo ula shaqaynaa Madaxwaynaha cusub iyo Madaxda Dawlada Dhexe. Dawlada dhexe waxaynu ka filaynaa inay il gaara oo lexejeclo ku eegi doonto dhulka dawlad deegaanka Soomaalida oo aan si fiican ula hanaqaadin horumarka dalka. Sidoo kale waxaynu Madaxwaynaha dawlad deegaanka ka codsanaynaa inuu tixgalin gaara siiyo deegaanadeena dhinacyada horumarinta adeegyada bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo aad uga dib dhacsan dhulka killilka 5aad.
Guddida Mataanaha Arab & Garxajis.